Oslo oo lagu aasay Labo Gabdhood oo Walaalo ah kuwaasi oo Biriq ku dhacday Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaOslo oo lagu aasay Labo Gabdhood oo Walaalo ah kuwaasi oo Biriq ku dhacday
July 16, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Labada gabdhood ee walaalaha ah ee kala ah Benedicte iyo Victoria Myrset, oo 18 iyo 12 jir ahaa, oo ku dhintay danab kula dhacday Melshornet oo ku taal Hareid Axaddii la soo dhaafay, ayaa lagu aasay Oslo maanta.
Labada gabdhood ee walaalaha ah waxaa ku dhacay hillaac xilli ay ku sugnaayeen buurta Melshornet ee Hareid ee Sunnmøre Axadii, . Labada gabdhood ee walaalaha ah oo kala ahaa 12 iyo 18, ayaa meyd ahaa markii shaqaalaha gurmadku heleen.
Gabar saddexaad oo la socotay, oo la dhalatay labada gabdhood ee dhimatay, ayaa si xun u dhaawacantay laakiin waxaa laga soo saaray Isbitaalka Jaamacadda Haukeland Talaadadii toddobaadkii hore.
biriqda ka jirta wadanka Norway ayaa ah mid aad u sareysa meelaha qaar saacad gudohood ayaa la diiwaangaliyay 10,000 kun oo biriq ah